ခရီးသွားများအတွက်အပြန်အလှန်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း, ထုပ်ပိုး, ပိုက်ဆံနှင့်ပို | တစ်ဦးကရထား Save
ခရီးသွားများအတွက်အပြန်အလှန်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း, ထုပ်ပိုး, ပိုက်ဆံနှင့်ပို
နေအိမ် > ခရီးသွားများအတွက်အပြန်အလှန်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း, ထုပ်ပိုး, ပိုက်ဆံနှင့်ပို
ခရီးသွားများအတွက်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း – ခရီးသွားများစာရင်း – ခရီးသွားများစာရင်း – ခရီးသွားထုပ်ပိုးစာရင်း – ခရီးသွားရန်လိုအပ်သောငွေ
ခရီးသွားအမျိုးအစား – စီးပွားရေးသို့မဟုတ်အပန်းဖြေ (အပန်းဖြေခရီးသွားအမျိုးအစားများမှသင်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်, နှင်းလျှောစီး, ကမ်းခြေ, လေ့လာရေးခရီး, စခန်းချ.
sleepwear × 1
ဖိနပ်သို့မဟုတ် slates × 1
ရှပ်အင်္ကျီ / အင်္ကျီ / တီရှပ်× 3
ရှပ်အင်္ကျီ / အင်္ကျီ / တီရှပ်× 7
ရှပ်အင်္ကျီ / အင်္ကျီ / တီရှပ်× 14
sleepwear × 2
sleepwear × 3
သဲသောင်ပြင်ဘော်လီဘော / frisbee ဘောလုံး
ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီကိရိယာအစုံ
ငါးမျှား (တံငါသည်, ငွေလှေ, ငါးစာ)
ဂစ်တာ / ကစားကဒ်များ / သဟဇာတ
ပွဲများ / မီးကျောက်
လက်ကမ်းစာစောင် (ဘရိုရှာ, လက်ကမ်းစာစောင်)
အရေးကြီးသောဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း, လိပ်စာများ, အီးမေးလ်များ
မီးရထား, လေယာဉ်, ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်တွေ
လက်တော့ပ် / တက်ဘလက်
အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီများ / ဘက်ထရီ
ဤစာရင်းကို print ထုတ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးသွားများစာရင်းစာရင်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်နားမလည်ပါက, ကျေးဇူးပြုပြီးအဆင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ, ထို့နောက်အဆုံး၌သင့်ခရီးကိုတတ်နိုင်သမျှအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်သင်လိုအပ်သောအရာများပါဝင်သည့်သင့်ခရီးသွားလာရေးစာရင်းကိုဖော်ပြလိမ့်မည်. အဆိုပါစာရင်းသင်တန်း၏ print ထုတ်နိုင်ပါတယ်. သင်ဆဲကအလုပ်မလုပ်နိုင်လျှင်, ကျေးဇူးပြု ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားကိုဆက်သွယ်ပါ.
ဒီ application ကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊.
ငါတို့ဖန်တီးခဲ့သည့်အရာနှင့်တူသောမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှအဘယ်ကြောင့်မဖန်ဆင်းခဲ့သည်မှာသေချာသည်, ဒါပေမယ့်မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာဘောပင်နဲ့စက္ကူကိုသုံးပြီးခရီးသွားလာရေးအတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုသူငယ်ချင်းတွေ၊ ခရီးသွားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ကြတယ်, မဟုတ်တော့ပါဘူး.
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, ခရီးသွားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြန်အလှန်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကိုသင်နှင့်အတူထားထားခဲ့သည်, အကောင်းဆုံးနှင့်ဈေးအပေါဆုံးရထားလက်မှတ်ဈေးနှုန်းများကိုပြန်လည်ရယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်ကူညီမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ် တစ်ဦးကရထား Save.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုဒီစာမျက်နှာ embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ဒီနေရာမှာပဲ click နှိပ်: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Finteractive-checklist-for-travelers%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml သငျတို့သက de မှ / fr သို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကား / ပြောင်းလဲနိုင်သည်.